Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Virgil van Dijk tantaran'ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny kintan'ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Vig'. Ny Virgil van Dijk Childhood Story plus Ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainam-baovao dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisana amin'ny fiainana ary ny maro momba ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony fa vitsy no mihevitra ny Virgil van Dijk Biography izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Virgil van Dijk dia teraka tamin'ny andro 8 tamin'ny Jolay 1991, any Breda, Holandy. Izy no kanseran'ny fiterahana. Izy dia teraka tamin'ny ray Holandey (Ray Van Dyke) sy ny renin'i Surinamese (Ruby Van Dyke). Virgil dia mitovy amin'ny reniny tsara tarehy, tsy toy ny ray.
Virgil teraka nateraka tsy nahomby taorian'ny ezaka maro hanombohana ny asany ao Willem II.
Heverina ho miadana sy kely izy. Taorian'izay dia nirohotra hopitaly izy noho ny fitsaboana iray tsy mampino. Ny marokoroko dia mbola manasongadina hatrany ny daty ambany amin'ny vavony ambany.
Soa soa ho azy, dia sitrana tamin'ny fahasimban-keviny sy ny fahasarotany izy. Ny fitomboan'i Virgil sy ny fitomboany taorian'ny famerenana dia nanjary tafahoatra loatra. Ny ray aman-dreniny dia fahagagana. Nahitana fanombohana nahomby teo amin'ny asany izany.
Virgil dia nandeha 255 km avy any amin'ny tanàna niaviany Breda ny Groningen izay nanome azy ny antso voalohany ho an'ny baolina kitra. Taorian'ny naha mpilalao matihanina azy, dia nifindra tany Celtic tao 2013 izy, izay nahazoany ny Scottish Premiership. Nantsoina tao amin'ny ekipan'ny Ekipa Skotin'ny PFA nandritra ny roa taona izy, ary nahazo ny Cup League tao amin'ny farany.
Tamin'ny Septambra 2015 dia niray hina izy Southampton. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Relationship Life
Rehefa nanao safidy momba ny fifandraisana maharitra i Virgil dia nandeha ho an'ny vehivavy iray izay inoany fa tsy dia azo inoana loatra ny hivadika ary koa, olona iray izay hijoro eo anilany amin'ny toe-javatra rehetra.
Virgil sy ny sipany Rike dia mitovy taona sy firenena (Ny Netherlands). Efa niaraka tamin'izy ireo hatramin'ny fahazazany.
Virgil sy ny fitiavany ny fiainany, Rike Nooitgedagt
Rike Nooitgedagt no nanampy an'i Virgil hipetraka ao amin'ny fiainam-baovao iray vaovao amin'ny androny ao Willem II. Noraisina an-tsitrapo noho ny fialany ny asany avo lenta mba hifindrany amin'ny fitiavany ny fiainany any Ekosy sy Grande-Bretagne.
Hoy i Rike, indray mandeha: "Maty ahoked ho mpitantana varotra ary nivarotra karazana lamaody samihafa tany amin'ireo magazay tao Holland. Tiako izany nefa tsy maintsy niala tamin'ny toerako aho na aiza na aiza alehan'ny baolina kitra. Hatreto, efa nanapa-kevitra tsara izahay ary manana traikefa miaraka amin'ilay alika mahafinaritra. "
Virgil, Rike ary ny alika tiany
Rike izao dia vehivavy mpilalao baolina lavalava ary Wag. Vao haingana, Virgil dia nanambara ampahibemaso ny tovovaviny nandritra ny fialan-tsasatra niainany. Namoaka ny sariny izy nanandratra ny satroka bikini-tady teo an-tongony ary nanoratra hoe: "Ianao no fitiavako ny fiainako!".
Ao amin'ny fampisehoana ampahibemaso iray hafa, navoakan'i Rike: "Tiako ianao tsy hoe fotsiny hoe iza ianao fa iza moa aho amin'izay miaraka aminao? "
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -National Team alohan'ny Zaza
Ireo mpivady dia nanana ny zanany voalohany tao amin'ny 2014: zanakavavy iray izay mahafinaritra an'i Virgil araka izay hita ao amin'ny sary etsy ambany.
Namela ny zanany vavy niakatra ny lanitra i Virgil
Ny nahaterahan'ny zazakely dia hetsika iray. Tamin'io fotoana io dia notanterahin'i Rike tamin'ny Septambra 2014 i Van Dijk, tamin'ny farany, nahazo izany fanasana izany Ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra any Nizeria Tena naniry mafy izany izy. Ankoatr'izay, mbola tsy naniry ny tsy hiteraka ny zanany vavy ilay mpiaro. Ka inona no nataony? ...
Virgil nandamina ny ankizivaviny vao teraka ny zanany vavy. Notsikerain'ny mpankafy na dia izany aza Pays-Bas mpanazatra, Guus Hiddink izay niantso azy.
Rehefa avy nanao ny safidy tsy ilaina, dia nahatratra azy ny nemesis. Guus Hiddink dia tsy nifidy azy noho ilay antsoina hoe antitra efa nomanina.
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fametavetana ny tovovavy
Nohamafisina fa i Virgil van Dijk dia indray namitaka an'i Rike raha mbola bevohoka izy. Nolazainy fa nanome vola an'i Georgie Lyall hiara-matory aminy izy.
Georgie dia nifanena tamin'ny Dutch Dutch ace van Dijk ora taorian'ny nankalazàny ny anaram-boninahitr'i Celtic tamin'ny fandresen'i Rike Nooitgedagt tao Parkhead.
Ny fiheverana ny hihaona amin'i Georgie izay nameno ny sainy raha nandany fotoana niaraka tamin'i Rike izy nandritra ny fankalazana ny fankalazana azy. Ny loharanom-baovao iray dia nanambara fa ny mpivady no nifanerasera tamin'ny andro talohan'ny nanaovan'ny mpihazakazaka Celtic ny tanany amin'ny volafotsy.
Ny fitiavana rat Ratsy Virgil sy Georgie dia nandrakitra an-tsokosoko alohan'ny niverenan'izy ireo tany amin'ny hotely nanaiky.
Nipoitra ny sary manaraka izay nambara taloha sy taorian'izy ireo, ary nahavita azy ireo tamin'ny fandriana.
I Georgie Lyall no nanapa-kevitra ny hiantso azy hoe fialana aorian'ny fanapahan-kevitra hanova ny fomba fiainany. Izany dia nitranga taorian'ny nanaovany tolotra anjerimanontolo mba handinihana ny mpitsabo mpanampy.
Ao anatin'ny teniny ...: "Nekena tamin'ny dingam-pitsaboana aho. Ny fitsangatsanganana dia zavatra tiako hatao. Indraindray aho lasa nianjera tamin'ny indostrian'ny lehibe raha mbola tanora aho. Tao anatin'izay dimy taona teo ho eo aho - saingy efa nahazo ny zava-drehetra tao amin'ny "
Nanohy ny teniny izy ... "Ankehitriny dia matotra aho mba hametrahana ny lohan-tserasera ary hanome izay rehetra tokony ho fantatro, hahazoana mari-pahaizana ary hanao zavatra mendrika."
Narahina ny fanesorana ny kaontiny amin'ny media sosialy. Manizingizina izy fa tsy manenina izy
momba ny lasa nalainy taloha ary koa nanatrika an'i Virgil.
Ny Holandey taorian'ny tratra dia nilaza fa nampandrenesiny azy avy amin'ny kaonty nolazainy
Anisan'ny namana. Ritoria tsy ampy herinandro taty aoriana dia nilaza taminy fa manantena zazakely izy. Tatitra vao haingana no milaza fa olona niova izy ankehitriny.
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Indray mandeha toy ny mpamono
Ny kalitao ara-teknika nataon'i Van Dijk dia porofo avy amin'ny bikany voalohany amin'ny maha-mpilalao baolina matihanina azy. Nolazaina ho mpitsongo vonjy maika ho an'ny ekipa voalohany ao Groningen izy. Nitarika ny ekipany izy tamin'ny fandresena 4-2 tamin'ny ADO Den Haag tamin'ny Aprily 2011.
Tsy ela izy dia niverina tany amin'ny toerana fiarovany voa-afovoany voajanahary, ary dia nanamarika ny tenany ho iray amin'ireo tanora mpiaro indrindra amin'ny baolina kitra eran-tany.
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Ny mpanohitra henjana indrindra
Niaiky i VIirgil van Dijk Antony Martial dia tsy toy ny milalao ao amin'ny Scottish Premiership.
Martial Indray mandeha dia nanampy an'i Virgin van Dijk taorian'ny fiarovan-doha ny fanafihana
Izany dia nitranga rehefa notafihan'ny Frantsa ny mpiaro ny Holandey raha nandresy i 3-2 tao St Mary ny Manchester United. Martial dia nandray fangorahana mihitsy aza tao Van Dijk ary nanampy azy niaraka tamin'ny kibony talohan'ny nifaranan'ny lalao.
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -finoana
Virjil dia finoana amin'ny finoana. Manamboatra fotoam-bavaka manokana ho an'ny fianakaviany sy ny sipany ary ny olona tiako izy. Na dia tsy mandeha miangona aza izy.
Amin'ny teniny ...'Raha mbola kely aho dia nandeha tany am-piangonana alahady ary avy eo rehefa nihalehibe aho dia nijanona. Indraindray aho mivavaka ary tsapako fa nanampy ahy tamin'ny fotoana sarotra izany. '
Virgil van Dijk tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Zodiac Trait
Virgil van Dijk dia kansera ary manana ny toetrany manaraka ny toetrany;
Ny Herin'ny Virgil van Dijk: Tena mahavariana, mandresy lahatra, mampihetsi-po ary mientanentana, mandresy lahatra.
Ny fahalemen'i Virgil van Dijk: Moody, pessimista, mampiahiahy, manipulation, tsy azo antoka.
Inona no nataon'i Virgil van Dijk? Hira, fialam-boly any an-trano, miala sasatra na ao anaty rano, manampy ny olon-tiany, sakafo tsara amin'ny namana.
Inona no tsy hafahan'i Virgil van Dijk: Ny olon-tsy fantatra, ny fanakianana ny reniny ary ny fanehoana ny fiainana manokana.
Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Virgil Van Dijk momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!